Neck Muscles Strain – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
? အုနျးလှဲခွငျး (သို့မဟုတျ) လညျပငျးကွှကျသားတှနောပွီး ခေါငျးလှညျ့မရတော့တဲ့အခါ ?
ကှနျပြူတာရှေ့ အကွာကွီးထိုငျနပွေီး ထတော့မှ ဇကျကွောတှတေောငျ့ပွီး လှညျ့မရပွုမရ ဖွဈဖူးလား?
ရုပျရှငျကို ရှဆေုံ့းတနျးက မော့ကွညျ့ပွီး လညျပငျးကွှကျသားတှေ နာလာတာမြိုးကွုံဖူးလား?
ခဈြသူမကျြနှာ တဈကမ်ဘာထငျ ဖုနျးကိုတမတေ့မောငုံ့ကွညျ့ chat နပွေီး အပွငျလောကကို မော့ကွညျ့တော့မှ လညျပငျးကွှကျသားတှနောနတေဲ့ ခဈြသကျသတှေရေော ပွဖူးလား?
ခရီးသှားရငျး ခေါငျးဘေးကိုစောငျးပွီးအိပျပြျောသှား နိုးလာတော့ ဇကျလှညျ့မရပဲ အုနျးလှဲသှားပွီ ဆိုတာမြိူး ဖွဈဖူးလား?
အကွောငျးအရာတှကှေဲပမေဲ့ လညျပငျးကွှကျသားတှေ နာစတေဲ့ အခွခေံသဘောတရားကတော့ တူတူပါပဲ။
ခေါငျးမော့ ခေါငျးငုံ့ နဲ့ ဘယျလှညျ့ ညာလှညျ့ လုပျဖို့အတှကျ လညျပငျးကွှကျသားတှကေို သုံးရပါတယျ။ ပုံမှနျ လှုပျရှားမှုတှကွေောငျ့တော့ ဒဏျတှေ နာကငျြမှုတှမေဖွဈစနေိုငျပါဘူး။
အပျေါမှာ ပွောခဲ့တဲ့ ဥပမာတှလေိုမြိုး လညျပငျးကွှကျသားတှကေို အခြိနျကွာကွာ ဆှဲဆနျ့ ဒဏျပိစတေဲ့ အခွအေနတှေမှောတော့ ကွှကျသားအတှငျးက yofibrils တှပေကျြစီးပွီး ကွှကျသားနဲ့ ကွှကျသားအစှနျးက tendon အကွောတှေ ဒဏျရာရသှားတတျပါတယျ။
– တခါတလမှော သိပျလေးတဲ့ အလေးအပငျ တဈခုခု မလိုကျရာက လညျပငျးကွှကျသားတှကေိုပါ သှားထိပွီး နာသှားတတျပါတယျ။
– တခါတလေ ရုတျတရကျ ကားဘရိတျ ဆောငျ့အုပျတာမြိုး မတျောတဆမှုတှကွေောငျ့လညျး လညျပငျးကွှကျသားတှကေို အားနဲ့ အရှိနျပွငျးပွငျးဆှဲဆနျ့သလို ဖွဈစပွေီး နာသှားတတျပါတယျ။
– အားကစားသမားတှမှော အဖွဈမြားပွီး ပထမဆုံးလကေ့ငျြ့ရေးဆငျးတဲ့ ရကျတှမှော ပိုဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။
ထိတဲ့ ကွှကျသားအုပျစုပျေါမူတညျပွီး လညျပငျးပတျလညျတနရောရာမှာ အဲ့ဒီ့ဘကျကို လှညျ့မရအောငျ နာနေ တောငျ့နတေတျပါတယျ။
မြားသောအားဖွငျ့ ဖွဈဖွဈခငျြး ပထမရကျ ဒုတိယရကျတှမှော အရမျးနာလာတတျပမေဲ့ တခါတလေ ခကျြခငျြးမနာဘဲ နညျးနညျး နာရာက ရကျတျောတျောကွာမှ ပိုဆိုးလာတတျလို့ ရောဂါမွဈဖြားကို အစရှာမရဘဲ ဘာကွောငျ့ဖွဈမှနျးမသိ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
အုနျးလှဲရငျ လူကွီးတိုငျးပွောလရှေိ့တဲ့ ရိုးရာနညျးက ခေါငျးအုံးကို နပေူထုတျလှမျးခိုငျးတာပေါ့။ ဘာမှမဆိုငျတဲ့ ရယျစရာ တဈခုလို့ထငျရပမေဲ့ နပေူလှနျးထားတဲ့ ခေါငျးအုံးပူပူမှာ အိပျကွညျ့ရငျတော့ တောငျ့နတေဲ့ လညျပငျးကွှကျသားတှေ အနှေးဓာတျကွောငျ့ အနညျးငယျပွလြေော့သကျသာစနေိုငျမယျ ထငျပါတယျ။ ခေါငျးအုံးကိုနပေူလှမျးရုံနဲ့တော့ မသကျသာစပေါဘူး။
အနောကျတိုငျးကုထုံးတှအေရတော့ ရနှေေးအိတျကပျပေးရငျ အထိုကျအလြောကျသကျသာစပေါတယျ။
ခေါငျးအုံးပါးပါးနဲ့ အိပျရပါမယျ။ ခေါငျးအုံးအမြားကွီးဆငျ့အိပျတာမြိုးရှောငျရပါမယျ။
ကွှကျသား နာကငျြတောငျ့တငျးမှုလြော့စမေဲ့ လိမျးဆေးတှလေိမျးလို့ရပါတယျ။
သောကျဆေးတှလေညျးသောကျလို့ရပမေဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှရေဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကေလညျး ကွောကျစရာမို့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသတိုငျပငျတာတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
? ဆရာဝနျပွဖို့ လိုလား
ပုံမှနျ လညျပငျးကွှကျသားနာကငျြမှုတှကေ ရကျပိုငျးအတှငျးသကျသာသှားတတျပါတယျ။ ဒီလိုမဟုတျဘဲ ကွာနရေငျတော့ ဆရာဝနျပွဖို့လိုပါတယျ။
ကားအကျစီးဒငျ့လိုမြိုး အမွငျ့ကပွုတျကတြာမြိုး စတာတှကွေောငျ့ ဖွဈတာဆိုရငျ ဆရာဝနျပွသငျ့ပါတယျ။
အရမျးတောငျ့တငျးနာကငျြနတေဲ့အခွအေနမြေိုးမှာ လညျပငျးလကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျဖို့လညျး လိုအပျလို့ ကြှမျးကငျြတဲ့ physiothreapist ရဲ့အကူအညီလညျး ယူရပါမယျ။
နာကငျြတာတှပြေောကျသှားရငျတောငျမှ ကွှကျသားလေးတှေ နဂိုမူလအခွအေနပွေနျရောကျဖို့ ၁၂ပါတျလောကျအထိကွာတတျတာမို့ ပွနျဒဏျမဖွဈအောငျ ကောငျးကောငျး အနားပေးထားရမယျနျော…။
? အုန်းလွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) လည်ပင်းကြွက်သားတွေနာပြီး ခေါင်းလှည့်မရတော့တဲ့အခါ ?
ကွန်ပျူတာရှေ့ အကြာကြီးထိုင်နေပြီး ထတော့မှ ဇက်ကြောတွေတောင့်ပြီး လှည့်မရပြုမရ ဖြစ်ဖူးလား?
ရုပ်ရှင်ကို ရှေ့ဆုံးတန်းက မော့ကြည့်ပြီး လည်ပင်းကြွက်သားတွေ နာလာတာမျိုးကြုံဖူးလား?
ချစ်သူမျက်နှာ တစ်ကမ္ဘာထင် ဖုန်းကိုတမေ့တမောငုံ့ ကြည့် chat နေပြီး အပြင်လောကကို မော့ကြည့်တော့မှ လည်ပင်းကြွက်သားတွေနာနေတဲ့ ချစ်သက်သေတွေရော ပြဖူးလား?
ခရီးသွားရင်း ခေါင်းဘေးကိုစောင်းပြီးအိပ်ပျော်သွား နိုးလာတော့ ဇက်လှည့်မရပဲ အုန်းလွဲသွားပြီ ဆိုတာမျိူး ဖြစ်ဖူးလား?
အကြောင်းအရာတွေကွဲပေမဲ့ လည်ပင်းကြွက်သားတွေ နာစေတဲ့ အခြေခံသဘောတရားကတော့ တူတူပါပဲ။
ခေါင်းမော့ ခေါင်းငုံ့ နဲ့ ဘယ်လှည့် ညာလှည့် လုပ်ဖို့အတွက် လည်ပင်းကြွက်သားတွေကို သုံးရပါတယ်။ ပုံမှန် လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တော့ ဒဏ်တွေ နာကျင်မှုတွေမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေလိုမျိုး လည်ပင်းကြွက်သားတွေကို အချိန်ကြာကြာ ဆွဲဆန့် ဒဏ်ပိစေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာတော့ ကြွက်သားအတွင်းက yofibrils တွေပျက်စီးပြီး ကြွက်သားနဲ့ ကြွက်သားအစွန်းက tendon အကြောတွေ ဒဏ်ရာရသွားတတ်ပါတယ်။
– တခါတလေမှာ သိပ်လေးတဲ့ အလေးအပင် တစ်ခုခု မလိုက်ရာက လည်ပင်းကြွက်သားတွေကိုပါ သွားထိပြီး နာသွားတတ်ပါတယ်။
– တခါတလေ ရုတ်တရက် ကားဘရိတ် ဆောင့်အုပ်တာမျိုး မတော်တဆမှုတွေကြောင့်လည်း လည်ပင်းကြွက်သားတွေကို အားနဲ့ အရှိန်ပြင်းပြင်းဆွဲဆန့်သလို ဖြစ်စေပြီး နာသွားတတ်ပါတယ်။
– အားကစားသမားတွေမှာ အဖြစ်များပြီး ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ရေးဆင်းတဲ့ ရက်တွေမှာ ပိုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ထိတဲ့ ကြွက်သားအုပ်စုပေါ်မူတည်ပြီး လည်ပင်းပတ်လည်တနေရာရာမှာ အဲ့ဒီ့ဘက်ကို လှည့်မရအောင် နာနေ တောင့်နေတတ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ပထမရက် ဒုတိယရက်တွေမှာ အရမ်းနာလာတတ်ပေမဲ့ တခါတလေ ချက်ချင်းမနာဘဲ နည်းနည်း နာရာက ရက်တော်တော်ကြာမှ ပိုဆိုးလာတတ်လို့ ရောဂါမြစ်ဖျားကို အစရှာမရဘဲ ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အုန်းလွဲရင် လူကြီးတိုင်းပြောလေ့ရှိတဲ့ ရိုးရာနည်းက ခေါင်းအုံးကို နေပူထုတ်လှမ်းခိုင်းတာပေါ့။ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ရယ်စရာ တစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့ နေပူလှန်းထားတဲ့ ခေါင်းအုံးပူပူမှာ အိပ်ကြည့်ရင်တော့ တောင့်နေတဲ့ လည်ပင်းကြွက်သားတွေ အနွေးဓာတ်ကြောင့် အနည်းငယ်ပြေလျော့သက်သာစေနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ခေါင်းအုံးကိုနေပူလှမ်းရုံနဲ့တော့ မသက်သာစေပါဘူး။
အနောက်တိုင်းကုထုံးတွေအရတော့ ရေနွေးအိတ်ကပ်ပေးရင် အထိုက်အလျောက်သက်သာစေပါတယ်။
ခေါင်းအုံးပါးပါးနဲ့ အိပ်ရပါမယ်။ ခေါင်းအုံးအများကြီးဆင့်အိပ်တာမျိုးရှောင်ရပါမယ်။
ကြွက်သား နာကျင်တောင့်တင်းမှုလျော့စေမဲ့ လိမ်းဆေးတွေလိမ်းလို့ရပါတယ်။
သောက်ဆေးတွေလည်းသောက်လို့ရပေမဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကလည်း ကြောက်စရာမို့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
? ဆရာဝန်ပြဖို့ လိုလား
ပုံမှန် လည်ပင်းကြွက်သားနာကျင်မှုတွေက ရက်ပိုင်းအတွင်းသက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကြာနေရင်တော့ ဆရာဝန်ပြဖို့လိုပါတယ်။
ကားအက်စီးဒင့်လိုမျိုး အမြင့်ကပြုတ်ကျတာမျိုး စတာတွေကြောင့် ဖြစ်တာဆိုရင် ဆရာဝန်ပြသင့်ပါတယ်။
အရမ်းတောင့်တင်းနာကျင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ လည်ပင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်လို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ physiothreapist ရဲ့အကူအညီလည်း ယူရပါမယ်။
နာကျင်တာတွေပျောက်သွားရင်တောင်မှ ကြွက်သားလေးတွေ နဂိုမူလအခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ ၁၂ပါတ်လောက်အထိကြာတတ်တာမို့ ပြန်ဒဏ်မဖြစ်အောင် ကောင်းကောင်း အနားပေးထားရမယ်နော်…။